Home Wararka Gud. Mursal: Mooshinka waxaa la waafajin doonaa Distuurka & X/Hoosaadka G/Shacbiga
Gud. Mursal: Mooshinka waxaa la waafajin doonaa Distuurka & X/Hoosaadka G/Shacbiga
Gudoomiyaha Golaha shacbiga waxaa uu soo saaray waraaq xaqiijineysa in Mooshinkii laga keenay madaxweynaha JFS la taas oo oraneysa: “waxaa hindisaha moosinka la waa fajin doonaa sida uu qabo dastuurka dalka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka !”
Waraaqda ka soo baxday Guddoonka Barlamaanka dalka waxay Meesha ka saartay wararkii ay qortay Wakaalladda Wararka Somaliyeed SONNA oo ah hay’ad dawli ah iyadoo soo xiganeysa mid ka mid ah Shaqaalaha Balamanka oo mar waliba aan fahmin doorkiisa shaqo Mudane Cabdikarin X Buux.
Wakaaladda oo ay ahayd inay hubiso warka ay shacbiga gaarsiineyso inuu sax yahay iyo in kale ma gudanin hawsheeda, mana ka soo bixin mas’uuliyaddii ay shacbiga u haysay. Sida xeerar qabaan xeerar saxaafadda waxay ahayd wakaalladda inay xiriir la sameyso mas’uulka ugu sareeya xafiiskaas oo ah Guddoomiyaha Golaha shacbiga. Ma sameyn waxayna ku degdegtay inay fidiso been aan sal iyo raad toona lahayn.
SONNA lama mid ah warbaahinta caadiga ah waa hay’ad dawladeed oo waxaa laga maalgeliyaa canshuurta shacbiga. Sidaas darted waa inaysan ku fududaanin qoraallada daneysan ee ay shacbiga horkeenayaan. Tusaale waxay cinwaan ka dhgtay: “ DEGDEG: MOOSHINKII HINDISAHA XIL KA QAADISTA MADAXWEYNAHA OO JABAY”. Marka aad fiiriso cinwaankan waxaa kuu soo baxaya inuu mooshinkii buray, haddaba maanta oo uu goddoomiyaha Golaha shacbiga oo ah hay’addii ka masuulka ahayd mooshinka , gacantana ku haysa uu soo saaray waraaqda hoose SONNA maxay qori?.
Xildhibaanadda Barlamanka waxaan ka rabnaa inay SONNA iyo Madaxdeeda kula xisaabtamaan fowdo abuurkan iyo Marin habaabinta shacbiga canshuurtii laga qaaday mushaarka looga dhigay madaxda iyo shaqaalaha SONNA.
Shaqaalaha Golaha Shacbiga: Mudane Buux
Cabdikarin Xaaji Buux waa xoghaynta Golaha shacbiga wuxuuna u shaqeeyaa Gudoomiyaha Barlamanka. Shaqooyinka uu qobto waxaa ka mid inuu guddoonka, gaar ahaan guddoomiyaha uu u soo qoro waraaqaha, u hubiyo guddoonka in marka la keeno hinidse sharciyeed ay u dhameystiran yihiin habraaciisa la xiriira distuurka iyo inuu waafaqsan yahay xeer hoosaadka Barlamanka, kadib ayuu guddoomiyaha u gudbiyaa waa marka uu ka guto waajibaadkiisa xoghaynnimo. Guddoomiyaha oo huba inuu hindisahaan ay u dhameystiran sharciyaddiisa, kadib markii ay xoghayntiisa u soo hubisay ayuu amraa in la qabto, lana diiwaangeliyo.
Mudane Buux sidaas ayuuna sameey xataa hidisihii ugu dambeeyey ee ay MW Farmajo laga keenay oo waxaa uu soo hubiyey inay sharciyaddii u dhameystiran tahay. Hasa yeeshee waxaa dad badani la yaabay kadib markii uu ku kacay falal dembi ah oo keeni kara xabsi iyo inuu shaqadiisa ku waayo kuwaas oo kala ah:
In hindise uu isaga soo eegay sharcinimadiisa, hubiyey inay u dhan yihiin inuu haddaba waraaq diidmo ah ka daba keeno.
Isagoo og inaan laga bixi Karin Hindise marka la keeno laakiin laga soo horjeesan karoo xaaladda codeynta ayuu ku kacay falalka noocan ah. Haddii hindisaha uu dhiman yahay muxuu u qabtay? Hadduu qabtaysay sidee looga bixi karaa?
Inuu isa siiyo awood uu waraaq uga qori karo isagoo shaqaale ah hawl socota oo ay madaxdiisa gacanta ku hayso, oo uu haddana waliba ku saxeexan yahay sidii isaga uu awooddaas leeyahay.
Inuu soo bandhigo magacayada iyo sirta xafiiska taas oo keetay inay yimaadaan falal khater gelinaya xildhibaanada, isla markaana abuuraya daaqad ah in musuq maasuq iyo laaluush halkaas ka bilowdo oo horayba loo handaday xildhibaanno, kuwana loo fidiyey inay laaluush qaataan.
Sheegashada awood been ah oo ah inuu yahay shakhsi awood u leh inuu qoraal ka soo saari karo arrimaha shaqo ee aan wali dhammaan oo uu ku ogaaday xurmada xafiiska uu xoghayntaka yahay isagoon amar uga haysan cidda xafiiska maamushaa waa guddoomiyaha golaha shacbigee.
Tolow haddii Xoghaynta Farmajo sidaas oo kale sameyso ama tan kheyrre maxaa dhacaya?
ma aha markii ugu horeysay ee Hindise uu qabti Buux, waase markii ugu horaysay ee uu talaabadan qaado. Haddaba maxaa lagu macneyn karaa ma qabiil baa aqaaday oo Madaxweynihii si sharci ah oo aan loo kala haray lagu doortay ayaa maanta xigto ku soo haray oo hiilka Buux u baahday iyo mise qarash iyo dhisamaha guriga xaafadda Hawl wadaag ka socda ayaa kala dhinnaaday?
Xaqiiqdii soo banhigidda magacyada xilhibaanada saxiixay waxay qatar gelinysaa nolosha xildhibaada, sidoo kale waxay abuuraysaa fursad ay xukuumaddu cadaadisk qabiileed iyo mid dhaqaalaba ku saarto xildhibaanada keenay motionka.
Sidaas darted Mudane Buux uma qalmo inu ka sii shaqeeyo xafiis awooddaas leh, oo masiirka dalka laga maamulo waxaana ku talineynaa in laga qaado tallaabada ku haboon iyadoo loo caddaalad falayo.
Previous articleSomaliyey Maanta Shalay u ekaa?!!!! Bal u fiirsada!
Next articleMusharaxiinta isbedel doonka KG oo walaac ka muujiyay amniga Baydhabo (War Saxaafadeed)
Warfaafinta Soomaalia oo weerarkii ugu adkaa ebid ku qaaday Shariif Sheekh...